Kinetic na ike ike: àgwà, iche na mkpa | Green Renewables
Portillo nke German | 11/05/2022 12:00 | Ọzụzụ
Kinetic ike bụ ike metụtara ngagharị na ike nwere ike bụ ike metụtara ọnọdụ na usoro. N'ozuzu, ike bụ ikike ịrụ ọrụ. Ma ume kinetic na ike nwere ike na-anọchi anya ụdị isi abụọ nke ike dị adị. Ike ọ bụla ọzọ bụ ụdị dị iche iche nke ike nwere ike ma ọ bụ ike kinetic ma ọ bụ ngwakọta nke ha abụọ. Dị ka ihe atụ, n'ibu ike bụ ngwakọta nke kinetic na ike ike.
N'isiokwu a, anyị na-agwa gị ihe niile ị chọrọ ịma banyere kinetic na ike ike, àgwà ya na ihe atụ.
1 kinetic na ike ike
1.1 Ike kinji
1.2 Ike kinji
2 Kedu ka ike nke kinetic si arụ ọrụ?
3.1 ike gravitational ike
3.2 ike na-agbanwe ike
3.3 kemịkalụ ike ike
3.4 ike electrostatic ike
Ike Kinetic bụ ụdị ume ejikọtara na mmegharị ahụ. Ihe ọ bụla nke na-emegharị nwere ike nke kinetic. Na International System (SI), unit nke kinetic energy bụ jouje (J), nke bụ otu unit dị ka ọrụ. Otu joule hà nhata 1 n'arọ.m2/s2. Enwere ọtụtụ ihe atụ nke iji ike kinetic na ndụ kwa ụbọchị.
Ịgba bọọlụ: Bowling bụ mmadụ na-atụba bọọlụ 3-7kg ka ọ kwatuo ntụtụ iri, nke dabere na ike nke bọọlụ na-ebu, nke dabere na oke na ọsọ bọọlụ ahụ.
Ifufe: Ikuku abụghị ihe ọzọ karịa ikuku na-emegharị. Enwere ike ịtụgharị ike kinetic nke mmegharị ikuku ka ọ bụrụ ọkụ eletrik site na iji turbin ikuku.
Ike okpomọkụ: Ike thermal bụ ike kinetic jikọtara ya na mmegharị microscopic nke ụmụ irighiri ihe dị na sistemụ. Mgbe anyị na-ekpo ọkụ mmiri ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ, anyị na-agbakwunye ike kinetic site na nnyefe okpomọkụ.
Ike nwere ike bụ ụdị ike metụtara ọnọdụ ikwu n'ime usoro, ya bụ, ọnọdụ nke otu ihe n'ihe gbasara nke ọzọ. Igwe ndọta abụọ dị iche iche nwere ike ịdị n'etiti ibe ha. Na SI, nkeji nke ike nwere ike bụ jouje (J), dịkwa ka ike kinetic. Otu joule hà nhata 1 n'arọ.m2/s2.
Ọtụtụ n'ime isi mmalite ndị anyị na-eji maka ume na-adabere na ike nwere ike.
Ike echekwara na mmiri mmiri: Mmiri a na-echekwa n'ime ebe nchekwa dị elu, dị ka mgbochi mmiri, nwere ike ndọda. Mgbe mmiri ahụ dara, ọ na-agbanwe ike nke nwere ike ịbụ ike nke nwere ike ịrụ ọrụ na turbines dị na ala nke dam ahụ. A na-ekesa ọkụ eletrik nke turbines ndị a na-emepụta na netwọk nkesa mpaghara.
Mmiri: Mgbe a na-agbatị ma ọ bụ na-agbanye mmiri, ọ na-echekwa ike ụfọdụ n'ụdị ike na-agbanwe agbanwe. Mgbe a tọhapụrụ mmiri ahụ, a na-atụgharị ike ike echekwara ka ọ bụrụ ike ike.
Ta na akụ: Ụta na akụ bụ ihe atụ nke ka ike na-agbanwe ike na-agbanwe n'ime ike kinetic. Mgbe eriri ụta na-agbatị, a na-echekwa ọrụ a na-arụ n'ime eriri agbatị dị ka ike nwere ike. Mgbe ị na-atọpụ eriri ahụ, a na-atụgharị ike nke eriri ahụ ka ọ bụrụ ume kinetic, nke a na-ebufe ya na akụ.
Eletrik: Eletrik bụ ụdị nke ike nwere ike ikpebi site na ebe a na-akwụ ụgwọ na usoro (ọkụ eletrik).
Kedu ka ike nke kinetic si arụ ọrụ?
Mgbe ihe na-emegharị ahụ bụ n'ihi na o nwere ume kinetic. Ọ bụrụ na ọ daa n'ihe ọzọ. nwere ike ịnyefe ike a na ya, ya mere ihe nke abụọ na-akpalikwa. Ka ihe wee nweta ume ngagharị ma ọ bụ ike, a ga-etinyerịrị ọrụ ma ọ bụ ike na ya.
Ogologo oge a na-etinye ike ahụ, otú ahụ ka ọsọ ahụ na-enweta site na ihe na-emegharị emegharị na ike ya. Mass na-emetụtakwa ike nke mmegharị ahụ. Ka ọnụ ọgụgụ ahụ dị ukwuu, ka ike nke kinetic dị ukwuu. Enwere ike ịgbanwe ya ngwa ngwa ka ọ bụrụ okpomọkụ ma ọ bụ ụdị ume ndị ọzọ.
N'ime njirimara kinetic energy anyị nwere:
Ọ bụ otu n'ime ngosipụta nke ike.
Enwere ike ibufe ya site n'otu ahụ gaa na nke ọzọ.
Enwere ike ịtụgharị ya n'ụdị ike ọzọ, dịka ọmụmaatụ, n'ime ike ọkụ.
Ị ga-etinye ike iji malite mmegharị.
Ọ dabere na ọsọ na oke nke ahụ.
Nchikota nke kinetic na ike nwere ike na-emepụta ike igwe (ike na-ejikọta ọnọdụ nke ihe na mmegharị ya). Dị ka e kwuru na mbụ, dynamics na-ezo aka na mmegharị. Enwere ike na-ezo aka n'ogo ike echekwara n'ime ahụ na izu ike.
Ya mere, ike nwere ike ga-adabere na ọnọdụ nke ihe ma ọ bụ usoro n'ihe metụtara ike ike nke gbara ya gburugburu. Ike kinetic dabere na mmegharị nke ihe.
ike gravitational ike
Akọwapụtara ike ndọdali dị ka ike nke nnukwu ihe nwere mgbe etinyere ya n'ime oghere ndọda. A na-emepụta oghere ndọda gburugburu gburugburu nnukwu ihe, dị ka ọtụtụ mbara ala na anyanwụ.
Dịka ọmụmaatụ, igwe na-agbagharị agbagharị nwere ike kachasị elu n'ogo kachasị elu n'ihi imikpu ya na mpaghara mgbada ụwa. Ozugbo ụgbọ ala ahụ daa ma tụfuo ịdị elu, a na-atụgharị ike ike ahụ ka ọ bụrụ ume kinetic.
ike na-agbanwe ike
Ike ike na-agbanwe agbanwe na-ejikọta ya na ihe na-agbanwe agbanwe nke ihe, ya bụ, ọchịchọ ya ịlaghachi n'ụdị mbụ ya mgbe a na-agbanye ya n'ike nrụrụ ka ukwuu karịa nguzogide ya. Ihe atụ doro anya nke ike na-agbanwe bụ ike nke mmiri nwere, nke na-agbasa ma ọ bụ nkwekọrịta n'ihi ike mpụga wee laghachi n'ọnọdụ mbụ ya otu mgbe a naghịzi etinye ike mpụga ahụ.
Ihe atụ ọzọ bụ usoro ụta na akụ, mgbe a na-adọta ụta ahụ na eriri na-agbanwe agbanwe, ike na-agbanwe ike na-erute oke, na-ehulata osisi, ma ọsọ na-anọgide efu. N'otu ntabi anya na-esote, a na-atụgharị ike ike ahụ ka ọ bụrụ ume kinetic na akụ ahụ na-agbapụ n'ọsọ ọsọ.
kemịkalụ ike ike
Ike ike kemịkalụ bụ ike echekwara na njikọ kemịkalụ nke atọm na ụmụ irighiri ihe. Otu ihe atụ bụ glucose na ahụ anyị, nke na-echekwa ike ike nke ahụ anyị na-agbanwe (site na usoro a na-akpọ metabolism) n'ime ike ọkụ iji nọgide na-enwe okpomọkụ.
Otu ihe ahụ na-aga maka mmanụ ọkụ (hydrocarbons) n'ime tankị gas nke ụgbọ ala. A na-atụgharị ike kemịkalụ nke echekwara na njikọ kemịkalụ nke mmanụ ụgbọala ka ọ bụrụ ike igwe na-eme ka ụgbọ ala ahụ dị ike.
ike electrostatic ike
Na ọkụ eletrik, echiche nke ike ike na-emetụtakwa, nke nwere ike ịtụgharị n'ime ụdị ike ndị ọzọ, dị ka kinetic, thermal ma ọ bụ ọkụ, nyere nnukwu mgbanwe nke electromagnetism. N'okwu a, ike na-abịa site na ike nke ọkụ eletrik na-emepụta site na ihe ndị ebubo.
Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga-amụtakwu gbasara kinetic na ike ike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » General » Ọzụzụ » kinetic na ike ike